Manakana ny WhatsApp tsy hitahiry sary sy horonan-tsary mankany amin'ny roul | Vaovao IPhone
Sakano ny WhatsApp tsy hitahiry sary sy horonan-tsary mankany amin'ny roulolanao
Raha mbola mahatoky amin'ny WhatsApp ianao ary manatanteraka ny resadresakao amin'ity fitaovana ity dia mety hanana izany ianao namana mahazatra izay mandefa anao sary sy video mampihomehy hatrany, amin'izao fotoana izao dia mety hampihomehy anao izy ireo, saingy voatahiry ao anaty horonan-tsarinao iPhone izy ireo ary, tsikelikely, mamela anao tsy hanana toerana ho an'ireo sary izay tena mahaliana anao.
Raha vantany vao nametraka ny WhatsApp tamin'ny iPhone izahay, dia nametraka andiana soatoavina default hatrany ny fampiharana, sanda izay amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia tsy ankasitrahantsika ary voatery manova izahay. Ny iray amin'ireo lafiny manelingelina indrindra izay hitantsika fa azy amin'ny WhatsApp dia ny an'ny fitehirizana horonantsary sy sary mandeha ho azy eo amin'ny roul.
Azo antoka fa maro aminareo no mahita ny tenanareo ho ao anaty vondrona namana, fianakaviana, fikambanana, vondrona sekoly ... izay anaovana horonan-tsary sy sary marobe. 99% ny atiny zaraina amin'ity vondrona ity dia mety tsy liana amin'ny fitazonana azy io izahay, mbola voatahiry ao anaty vatolantsika io.
Soa ihany fa mamela antsika hikirakira ny rindranasa i WhatsApp mba hamono ny fitehirizana sary sy horonan-tsary mandeha ho azy eo amin'ny roolinay. Ity safidy ity, izay tokony havela hateraka, mamela antsika hisafidy karazana atiny tianay hotehirizina ao anaty roolinay.
Ny fiasa mandeha ho azy an'ny WhatsApp tsy vitan'ny mampiasa toerana fitahirizana amin'ny fitaovana, fa koa ampiasao ny tahan'ny data-nao. Samy antony lehibe hamerana an'ity safidy ity izy roa ireo.
Ny vahaolana Tsotra be izy io ary raha tsy tianao ilay izy dia azonao atao foana ny manaiky ny mitahiry ireo dingana ireo.
1 Esory ny sary sy horonan-tsary mandeha ho azy amin'ny iPhone
2 Ahoana ny fomba hitehirizana sary WhatsApp amin'ny fampirimana hafa
3 Esory ny sary WhatsApp avy amin'ny iPhone mankany PC
3.1 Raha tsy nifanaraka tamin'ny habaka iCloud izahay
Esory ny sary sy horonan-tsary mandeha ho azy amin'ny iPhone
Voalohany indrindra, alohan'ny hanaovana an'ity hetsika ity dia tsy maintsy tadidintsika fa rehefa tsy mamono ny fitehirizana sary sy horonan-tsary mandeha ho azy amin'ny iPhone tsy misy fiantraikany amin'ny vondrona ihany, fa koa amin'ny resaka ifanaovantsika amin'ny olon-kafa, na amin'ny raintsika, renintsika, mpiara-miasa amintsika, zanakay, sakaizantsika ...
Raha te hisoroka ny terminal izahay tototry ny sary sy horonan-tsary momba ny hadalana izay zaraina amin'ny vondrona WhatsApp amin'ny toerana misy antsika dia tsy maintsy ataontsika ireto dingana manaraka ireto:
Voalohany indrindra, raha vao manokatra WhatsApp izahay dia mandeha amin'ny safidin'ny fanahafana, hita eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny fampiharana.
Tsindrio avy eo Internet
Ao anatin'ny menio Chats dia manana safidy isan-karazany azontsika atao isika. Amin'ireo misy rehetra misy dia tsy maintsy hesorintsika ny switch Tehirizo amin'ny sary.
Amin'izany fomba izany, raha vantany vao navadinay io jiro io, ny sary sy ny horonan-tsary rehetra andefasanao anay dia tsy hotehirizina ho azy eo amin'ny roul. Raha te hitahiry azy ireo isika dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto:
Raha vantany vao eo amin'ilay sary tianay hotahirizina izahay dia tsindrio ilay izy mba aseho amin'ny efijery feno.
Manaraka, tsindrio ny bokotra anjara, miorina amin'ny zoro ambany havia.
Misafidy ireo safidy samihafa aseho izahay afa-tsy. Amin'izany fomba izany, ny sary na ny horonantsary an'io chat WhatsApp io dia hotehirizina ao anaty roolinay.
Ahoana ny fomba hitehirizana sary WhatsApp amin'ny fampirimana hafa
iOS, tsy toy ny Android, ataovy ao anaty kitapo iray ny sary tsirairay avy izany dia miafara amin'ny fihodinan'ny fitaovantsika, zavatra mety ho tsara na ratsy arakaraka ny fomba fampiasantsika ny terminal-nay ary raha tiantsika ny handamina tsara ireo sary na tsia.
Mandritra ny Android, sary sy horonan-tsary WhatsApp dia voatahiry ao amin'ny folder WhatsAppAo amin'ny iOS, ny sary rehetra dia voatahiry ao anaty fampirimana iray ihany, ny hany safidy ahafahana manavaka azy ireo amin'ny ambiny dia ny fampiasana ilay rakikira miaraka amin'ny anaran'ny WhatsApp izay noforonin'ilay rindrambaiko rehefa apetrakao izy.
Raha vantany vao ao anaty rakikira WhatsApp izahay, dia ho hitantsika ireo sary sy horonan-tsary rehetra azontsika tamin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra, izay mamela antsika hanao hetsika miaraka amin'izy ireo ny fomba hamafana, hizarana, hanovana rakikira ...
Esory ny sary WhatsApp avy amin'ny iPhone mankany PC
Raha te-hanao kopian'ny backup amin'ny sary sy horonan-tsary rehetra ao amin'ny fitaovanao ianao hitahirizana azy ireo amin'ny solosaina na amin'ny rafitra fitahirizana ivelany, dia azonay ampiasaina izany fomba samihafa hanaovana azy.
Amin'ny tsy fitahirizanao sary WhatsApp amin'ny fisie samihafa, fa ao anaty rakikira izay noforonina ho azy rehefa manampy tag amin'ny sary, Tsy afaka mampifandray ny iPhone amin'ny PC izahay ary mandika an'io fampirimana na rakikira io.
Soa ihany fa manana fomba samihafa anananay izahay ahafahana mizara ny sarin'ny rakikira WhatsApp miaraka aminay hahafahana misintona azy amin'ny solosainay toy ny amin'ny olon-kafa. Saingy, amin'ity lahatsoratra ity ihany no hanoroanay anao ny fomba haingana indrindra sy malalaka tanteraka hahafahanao manao izany, satria mandoa foana ireo rindranasa izay manolotra antsika io asa io.
Raha mampiasa ny serivisy fitehirizana iCloud isika, dia haingana kokoa ny fizotrany, satria efa misy ao amin'ny iCloud ny sary sy ny horonan-tsary rehetra. Mba hahafahana miditra amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny iCloud sy misintona azy ireo amin'ny solosainantsika, dia mila fotsiny araho ireto dingana ireto:
Mitodika any amin'ny Rakitra WhatsApp aiza daholo ny sary sy horonan-tsary tianay zaraina.
Manaraka, tsindrio ny bokotra anjara hita eo amin'ny zoro ambany ankavia amin'ny efijery.
Farany dia tsindrio ny safidy Adikao ny rohy avy amin'ny iCloud. Hisy rohy hamboarina mitovy amin'io https://www.icloud.com/photos/#06_dH1mCq9ZSSpNYWS_kRaADCEQ.
Ity rohy ity ho hita mandritra ny iray volana misintona ary izay azon'ny rehetra idirana, satria tsy ilaina ny miditra amin'ny fotoana rehetra hidirana aminy.
Amin'ny alàlan'io rohy io, izay azontsika atao ny mandefa azy amin'ny alàlan'ny paositra, azontsika atao ny miditra amin'ny sary sy horonan-tsary WhatsApp rehetra izay ao anatin'ny rakikira WhatsApp.
Raha tsy nifanaraka tamin'ny habaka iCloud izahay
Raha tsy manana habaka fitahirizana ao amin'ny iCloud izahay, mihoatra ny 5 GB izay atolotra antsika maimaim-poana, ity dingana ity dia miadana kokoa, satria ny fitaovantsika dia hiandraikitra ny fampidinana any amin'ny iCloud ny sary rehetra izay nofinidintsika teo aloha, izay miankina amin'ny isany sy ny fifandraisana Internet ananantsika, dia mety maharitra bebe kokoa na latsaka ny fotoana.
Ny fetra tokana hitantsika raha tsy manana toerana fitahirizana maimaimpoana nifanarahana tamin'i iCloud isika dia ny fizarana rakitra sy horonan-tsary fotsiny avy amin'ny roolinay izay mitotaly. aza mihoatra ny 200 MB.
WhatsApp no ​​lasa ny sehatra fandefasan-kafatra be mpampiasa eran'izao tontolo izao (na dia tsy ny tsara indrindra aza noho izany antony izany, ny Telegram no fampiharana fandefasan-kafatra izay manome lanja indrindra antsika) ary io no meloka voalohany nahatonga ny SMS ho fitaovana iray mahomby amin'ny fifandraisana amin'ireo mpandraharaha telefaona, indrindra isaky ny faran'ny taona , izay nandefasana hafatra an-tapitrisany.
Saingy tsy ny WhatsApp irery no nanjary fitaovana lehibe indrindra hifandraisana amin'ireo mpampiasa maherin'ny 1.500 tapitrisa izay mampiasa azy isan'andro, fa io koa no nanjary fomba lehibe hizarana haingana sy mora ny sary sy ny horonan-tsary, ny horonantsary izay raha tsy mitandrina isika dia mifarana foana hatrany ambony vatolantsika. Manantena izahay fa miaraka amin'ny tutorial anay ny dingana tokony harahina mba hisorohana ny WhatsApp tsy hitahiry sary sy horonan-tsary ao anaty roul.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Sakano ny WhatsApp tsy hitahiry sary sy horonan-tsary mankany amin'ny roulolanao
Lele. Inona no zava-baovao. Mazava ho azy fa ity pejy ity isan'andro dia manolotra lahatsoratra tsara kokoa. Mariho ny mahatsikaiky ...
Hichi75 dia hoy izy:
Tamin'ny voalohany dia nitovy ny zavatra noeritreretiko, saingy tsaroako ireo gazety fanatanjahantena, izay tsy maintsy mivoaka isa-maraina feno vaovao, na dia tsy misy vaovao aza ... Na izany aza, mety mbola nisy tsy nahalala an'io ary tena SAMBATRA
Valiny ho an'i Hichi75
jorker dia hoy izy:
Tena Carmen, mety vazivazy ve izany, sa tsy izany?
Amin'izao fotoana izao sy ny fandraisanao anjara amin'ny "bullshit" fampahalalana dia tsy mendrika ny hamoaka lahatsoratra.
Eo anelanelan'ny Cristina sy ianao izao ... misy lesoka eto amin'ity tranonkala ity !!
Mamaly an'i jorker
Manome vaovao momba ny iPhone ity tranonkala ity, mazàna ny raharaham-pirenena ankehitriny, fa misy kosa ireo miditra satria vao nividy iPhone izy ireo ary manomboka amin'ny rindranasa mahazatra sy ny fahalianan'ny olom-baovao. Midika izany fa faly aho fa fantatrareo izany, saingy tsy ny olon-drehetra no manao izany ary tsy misy olona ato amin'ity bilaogy ity manoratra ho an'ny mpamaky tokana, fa ho an'ny vondrom-piarahamonina izay hisy ireo mila izany vaovao izany ary izay tsy mahalala.
Mikasika ny fisarahan'ny lahy sy ny vavy dia mandreraka ny fitsikaranao ny zazavavy foana rehefa nahazo ny toerana eto akaikin'ny namana lahy hafa izahay, ity resaka ity dia milaza betsaka momba anao noho ny momba ny tranonkala.
Miarahaba ary toy ny mahazatra, misaotra tamin'ny fanehoan-kevitra.
jorker tsy nanao fanehoan-kevitra momba ny firaisana, nilaza ny marina fotsiny izy. Ny hoe ianao sy i Cristina no mpanao kopia ratsy indrindra tsy misy ifandraisany amin'ny firaisana, kisendrasendra izany. Carmen, aza manahy, tsy misy olona miresaka momba ny toerana azonao tamin'ny lehilahy.
jveiga dia hoy izy:
Salama carmen. Tiako ho fantatra ny antony tsy ahafahanao mamorona lozisialy mba ahafahan'ny iPhones mitahiry sary WhatsApp ao anaty fampirimana hafa amin'ireo sary izay raisinay amin'ny fakantsarin'ny iPhone. Inona no antony ?.
Mamaly an'i jveiga
Ho ahy dia vaovao mahafinaritra izany, satria jereo fa nitady safidy an-tserasera aho mba tsy hananako ireo sary maloto izay andefasan'izy ireo anao avy amin'i Whatsaap ary mandeha mivantana any amin'ny rool izy ireo ary mazava ho azy rehefa manandrana mampiseho sary mahazatra ianao. mandehana miady aminy
josevr dia hoy izy:
inona ny volan'ny aritculo ...
Mamaly an'i josevr
Frogmen dia hoy izy:
Nanampy ahy izany, satria tsy fantatro izy. Misaotra
Valiny amin'i Frogmen
Elkin gomez perez dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny fampahalalana, efa fantatro izany fa fantatro fa misy mpampiasa maro izay vaovao na tsy manana traikefa be loatra ao amin'ny iOS izay ho azy ireo dia tena ilaina tokoa ity lahatsoratra ity. Ho an'ireo izay sahirana na efa nahalala na tsy liana amin'ilay lahatsoratra ... Azafady ... AZA VAKIO IZAO ARY AZA ATAOVA FAMONOANA NY FOTOANA ANDRIAMANITRA ... Tsy maintsy manaja ny ora sy ny fanokanan'ireo olona mamoaka lahatsoratra izahay ato amin'ity tranonkala ity fa tsy manao fanehoan-kevitra tsy mahalala fomba, manao firaisana ara-nofo, tsy mahafinaritra na tsy manatsara ny pejy mahafinaritra.
Valiny tamin'i Elkin Gomez Perez
Raha tena tsy fantatrao io safidy io dia satria mbola tsy nampiasa WhatsApp mihitsy ianao. na mbola tsy nanana finday smartphone afaka mihazakazaka WhatsApp ianao satria misy io safidy io na amin'ny iOs, Android, BB, WP, Nokia ...
Article tsara, ho an'ireo izay tsy nahalala, efa mahalala ary ho an'izay mahalala, hamafiso izany ...
Aleo tadidintsika ny fototra, ity dia tranonkala natokana ho an'ny iPhone, na inona na inona ifandraisany, na ifotony na efa za-draharaha, ho hitanao mihantona etsy ...
Tsy ny rehetra no manam-pahaizana, tsy ny rehetra no mpampiasa taloha, manaja azy ireo ho faly ...
Josegv dia hoy izy:
Ireo izay tia mitsikera ny asan'ny hafa, satria tsy manao ny pejy WEB azy manokana izy ireo, manoratra izay heverina fa mahaliana sy vaovao, mitady olona hampiantrano azy ireo izay misoroka dokam-barotra tsy misy dikany, izay manana kalitaon'ny fahitana tsara kokoa ary dia ny tsiron'ny "REHETRA". Ahhhh, aza adino ny fizarana fanehoan-kevitra ary aza manaiky fitsikerana ataon'ny mpanoratra na fialantsiny tsotra amin'ny fanoratana ratsy.
Valiny tamin'i Josegv
Condemor dia hoy izy:
Amin'ity tranga ity dia tsy ratsy fa apetraka indraindray ireo karazana lahatsoratra ireo, satria hoy i Carmen fa tsy ny rehetra dia triatra miaraka amin'ny iPhone ary tsy misy zavatra mahatadidy na mampianatra zavatra sasany, izay miharihary amin'ny sasany, dia mety manampy ny hafa
Valiny amin'i Condemor
Ho an'ireo Ball Negative rehetra mitsikera eto fa ny vehivavy dia manoratra Chorreadas madio izay ataon'ny fikosehana amin'ny fidirana amin'ity Post Llegenle ity fa tsy MMEN.
Voalohany amin'ny lohateny dia tsy marina na manjavozavo. Amin'ny fomba filazanao azy dia aza ialana ny mitahiry sary ao anaty roul, satria tsy tena azonao atao ny misintona azy ireo, mandra-pahatonganao manokana manome ilay horonan-tsary / sary tsirairay avy hisintona. Saingy rehefa vita izany dia mamonjy azy ireo amin'ny roul ihany.
Ary raha ny vaovao dia tara foana ianao, maka tahaka sy misintona amin'ny fomba ratsy amin'ny maha-mpandika teny ... Ohatra, ny lalao resahin'i Nacho dia tao amin'ny magazay nandritra ny herinandro farafahakeliny. Momba ny mpizara fankasitrahana ny fitondran-tena, 4 andro lasa izay no namakiako azy tao amin'ny appleinsider… .etc, sns
Azafady, tsy vao farafaharatsiny herinandro lasa izay ny lalao, avy amin'ny 17/7 izany. Miala tsiny.
Eny, tsara, Aitor, izao dia mandeha ianao ary manaparitaka azy, raha amin'ity fiainana ity dia tsy afaka mandeha mafy ianao satria izay no mitranga.
Ary inona no nitranga? Tsy marina ve fa tamin'ny herinandro lasa iny lalao iny? Hitako ny famerenana an'io lalao io tamin'ny herinandro lasa teo. Izay tsy midika hoe 7 andro no lasa, tsy misy intsony, te-hanazava fotsiny aho. Largemouth? Aondriho ny voaloboka.
Salama Aitor, hatramin'ny nanisanao ahy tamin'ny hevitrao dia hiezaka hamaly anao aho. Ny famakafakana ny rindranasa dia tsy amin'izao fotoana izao, fa ny fahafahany manasongadina ny rindranasa sy ny lalao izay ao amin'ny App Store na firy taona izy ireo no tao. Rehefa manandrana mamakafaka ny exclusivity isika dia manondro izany fa tsy tokony hisy ny ambiny.
Ankoatr'izay, tiako manokana ny misintona ny tranomboky amin'ny gazety ary indraindray manasongadina voninahitra taloha izay tsy eo amin'ny filaharana intsony ary noho ny kalitaony, dia mendrika ny hotsarovana ireo mpampiasa tsy nahalala azy tamin'izany fotoana izany.
Nilaza aho fa aza manantena ny hamakafaka ireo rindranasa vao tonga tao amin'ny App Store satria raha tsy amin'ny tranga tsy fahita na tranga tena manokana dia tsy hitranga izany. Mampahafantatra ny asanay sy ny fampivondronana ny vaovao mifandraika amin'ny iPhone sy ny tontolony, tsy ny olon-drehetra no manana feed RSS miaraka amina loharano 25 tokony hampandrenesina isaky ny segondra. Manana an'izany izahay amin'ny vitsy an'isa na dia toa mifanohitra aminao aza izany.
Salama, voalohany indrindra, ampahafantaro azy ireo fa manaja sy mankafy ny asany aho. Tsy manandrana mankamin'ny tsiro ratsy aho, na troll, mankahala, na zavatra hafa toa izany. Mazava ho azy, tsy maintsy manandrana ianao alohan'ny hanaovana famerenana izay lahatsoratra resahina. Marina ihany koa fa tsy ny mpampiasa rehetra no mahalala ny fiasan'ny terminal misy azy ireo, ary noho izany izahay dia eto ary ianao.
Tsy fanakianana manimba izany, fa ohatra, amin'ity lahatsoratra ity ihany dia ahitanao zavatra voasoratra toy izao: «…, tsy midika izany hoe afaka mitahiry azy ireo hatrany ianao.» Tsy takatry ny saina izany.
Amin'ny vaovao taloha, idem, nifanarahana tanteraka tamin'ny famonjena ny "voninahitra taloha", ilaina ny fahalalana hoe avy aiza isika, raha tsy hiteny isika.
Mazava izany Aitor, azoko tsara ny toerana misy anao ary ekena tsara foana ny fitsikerana manorina. Te-hanazava kely fotsiny ny fomba fiasanay aho ary ny zava-misy dia na dia manandrana haingana be aza isika, indraindray noho ny tsy fahampian'ny fotoana, ny fandaharam-potoana (vaovao maro no mahasarika antsika matory any Espana) na fandaminana tsotra fotsiny, kely dia kely ny raharaha lava kokoa hiseho navoaka. Mirary ny soa indrindra!
Salama indray, Carmen, araka ny voalazanao tsara, misy olona vaovao amin'ny rafitra fiasa IOS sy iPhone fa izay lazain'i Noe dia tena marina, tsy safidy IOS tokana izany satria efa ampiharina amin'ny ankamaroan'ny sehatra io ary tsy izany vaovao na mifandraika.
Azonao an-tsaina ve ny fanaovana lahatsoratra manazava ny fomba hanesorana ny fotoana farany an-tserasera na zavatra mitovy amin'izany, ataonao adala izahay amin'ny famoahana ireo zavatra ireo ary heveriko fa tsy ny ankamaroantsika.
Raha nanao hadisoana ianao tamin'ny famoahana azy dia tsy misy zavatra mitranga, ny fanekena fotsiny dia ampy dia vita ny lohahevitra.
Ankehitriny zavatra iray hafa izay hitako matetika amin'ny famoahana lahatsoratra, ny fitarainana noho ny tsy fametrahana ny loharano avy amin'ny toerana anaovanao kopia, hamerenana ary hametahana ireo zavatra vita an-tsoratra.
Tena tsy mino ny tenako aho ary ataoko ohatra, fa ny sinoa miasa any Foxconn dia manivana sary sasany ary mandefa azy tsara aminao.
Diso ny zavatra ataonao, satria manadihady ny atin'ny tranokala sasany ianao ary mamoaka azy eto, dia antsoina hoe mangalatra ny asan'ny hafa ny ao an-tanànako.
Ny tranonkala malaza rehetra dia mametraka ny atin'ny loharano, raha tsy olona, ​​araka ny lazain'ny mpampiasa sasany, dia tafiditra ao anatin'ny lesoka amin'ny fieritreretana fa anao io.
Tsy rariny ny maka ny fahamendrehan'ny hafa, andao hanetry tena kokoa ary aza hadinoina fa ny zavatra vita tsara dia miseho foana ary ny marina dia manana fomba tokana.
salama, ny marina dia nahasoa ahy io fanazavana io fa ny antsasany dia nomeny iphone fotsiny aho ary ny tena marina dia nanana galaksiia foana aho, ka tsy haiko ny mampiasa azy, fa ao amin'ny vahindanitra misy ny sarin'ny fakantsary voatazona ao anaty fampirimana iray, Facebook amin'ny iray hafa ary wassap amin'ny iray hafa, ka raha misy mandefa zavatra misy ny atiny ara-nofo ary mampiseho sary nalaiko tamin'ny fakantsariko tamina mpianakavy iray aho dia tsy hahita sary nalefan'izy ireo tamiko. ny iphone dia mitazona azy rehetra miaraka. Ka te hahafantatra aho raha misy fomba ahafahan'ny sary mamonjy ho azy ao anaty fampirimana samihafa?
Tsara ny tolakandro, misy safidy ve izao hamonjy azy ireo nefa tsy 1 amin'ny 1? satria 1 amin'ny 1 raha azoko ny safidy hitahiry amin'ny roul fa raha misafidy maromaro aho dia tsy avelako.
Salama maraina, fanontaniana iray, mandritra ny fotoana fohy dia tsy afaka mitahiry sary avy amin'ilay fangatahana mankany amin'ny telefaona aho, tsindrio ilay sary eo an-tampon'ny havanana ary manipy ahy ny safidy hizarana amin'ny tarehy fotsiny aho, inona no ataoko?
zulafornaguera dia hoy izy:
Nanompo ahy io !!!!! Misaotra anao !!! =)))
Mamaly an'i zulafornaguera
misaotra ahy fa nanompo ahy tsara !!
Mitady ny fomba tsy hitehirizana ny sary ao anaty roola aho satria tsy fantatro, ary ity lahatsoratra ity dia aseho, atsaharo ny famoahana fanehoan-kevitra ratsy ary vakio izay mahaliana anao, ry namana. Misaotra Carmen tamin'ny valinteninao! Bss
Misaotra anao nandefa azy. Tena nanampy ahy izany. Tsy azoko ny hevitra na fanakianana ratsy momba zavatra tsara. Tokony hanana fihetsika tsara kokoa isika raha te hanova an'izao tontolo izao miaraka amin'ny razambentsika.
Fa rehefa tel. Ho afaka hanavotra sary avy amin'ny hafatra fanenomana sy sary novokarin'ny fakan-tsary azy manokana ve ny iPhone?
Misaotra betsaka, tena nahasoa ahy ity famoahana ity. Miarahaba;
Ny tahiry voafetra ho an'ny faritra fanampiny ho an'ny Apple Watch Series 3 dia afaka manome anao Series 4
Apple dia namoaka ny iOS 12.4 Beta 2